Russian akwụkwọ ego | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
Swedish akwụkwọ ego
Ụgbọala Ego Ihe Ntụgharị
Russian akwụkwọ ego
Canadian Ego Exchange
Home Russian akwụkwọ ego RSS
The Ruble bụ ego nke Russian ego
The Ruble bụ ego nke Russian ego. A na-ejikwa dị ka akwụkwọ ego nke South Osisha na Abkhazia nke bụ abụọ federations na-ezughị ezu ghọtara. The Ruble e jibu dị ka akwụkwọ ego nke Soviet Union na Russian Alaeze Ukwu tupu ha n'ikpeazụ tisara. The mba nke Belarus na-nwere ego nke otu aha. 100 kopeks-eme ka 1 ruble. The Russian akwụkwọ ego anaghị nwere ihe oyiyi ọ bụla nke na-eji na eze na, ezie na “py6” bụ ihe afo na ọtụtụ-eji. Dị iche iche na akara na-ewere dị ka nke ugbu a ikpebi na ukara akara.
okwu “ruble” na-ewepụtara okwu “rubit” nke pụtara “bee”. Na mbụ, ruble bụghị n'ezie a minted ego; kama ọ bụ a ọtụtụ nke bara uru na ibu ibu. Ndị ọzọ karịa kopeks, ndị ruble nwekwara ike subdivided n'ime altyn (3 kopecks), na grivennik (10 kopecks), na polupoltina (25 kopecks), na poltina (50 kopecks). Ọ bụ n'afọ 1704 na Russia ọchịchị malitere esite silver rubles dị ka Russian akwụkwọ ego. 1 ruble na mbụ kpọrọ na 28 GM ọlaọcha ma na 1760 si ya devalued ka 18 GM ọlaọcha. N'agbata afọ 1756 na 1779, gold mkpụrụ ego e nyere na n'agbata afọ 1770 na 1771, mkpụrụ ego ọla kọpa e nyere. Assignatsii, nke e akwụkwọ promissory ndetu e nyere n'etiti years1769 na 1849.
The Russian akwụkwọ ego agbanweela a oké iju ke uru ikwu na a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ ego. N'ezie, kwupụta ọgwụgwụ nke August na mmalite September 2014, o metụrụ ndekọ lows.
Ndị Russia na-ata ahụhụ site na Economic Iduọ Ndutịm Uforo dị ka nke ọma. Otú ọ dị, ndị maara nke nsogbu metụtara na a devalued Russian akwụkwọ ego. The ruble si uru e kwere ka ịda ọbụna ala megide na nke dollar na euro. Nke a na-ekwe n'ihi na Russian aku na uba na-kegide kpamkpam na mmanụ, na ebe ọ bụ na mmanụ a na-erekwa na $49 a gbọmgbọm ha na-emejọ. M na-agụ ebe na Russia kwesịrị mmanụ na-banyere $70.00 kwa gbọmgbọm ka ha mee ka ha mmefu ego